निर्देशकले शाहरुखलाई एक रा’त आफ्नी श्रीमतीसँग बस्न आग्रह गरेपछि – Khabaarpati
December 15, 2020 December 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on निर्देशकले शाहरुखलाई एक रा’त आफ्नी श्रीमतीसँग बस्न आग्रह गरेपछि
काठमाडौं । शाहरुख खान (जन्म २ नोभेम्बर १९६५), आरम्भवाद एसआरकेद्वारा पनि चिनिन्छ, एक भारतीय अभिनेता, चलचित्र निर्माता, र टेलिभिजन व्यक्तित्व हुन्। खान १९८० को दशकमा धेरै टेलिभिजन धारावाहिकमा काम गरेर आफ्नो क्यारियर शुरू गरे। उनले चलचित्र क्षेत्रमा दिवाना फिल्मबाट प्रवेश गरे जुन फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल भयो। त्यस पछि उनी धेरै व्यावसायिक सफलताहरूको भाग भए र विभिन्न प्रशंसित प्रदर्शन गरेका छन् ।
खान भारतको नयाँ दिल्लीमा इस्लाम धर्मको पठान बंश भएको घरमा १९६५ मा जन्मिएका थिए । उनको बुबा ताज मोहम्मद खान ब्रिटिश भारत को एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थिए। उनले सेन्ट्रल दिल्लीमा सेन्ट कोलम्बस स्कूलमा अध्ययन गरे। यद्यपि उनले आफ्नो स्कूलको समयमा खेलमा उत्कृष्ट भए तापनि उनलाई चो ट लागेको कारणले खेल खेल्नबाट रोक्न थालेको थियो। यस समयमा उनले अभिनय, सडक नाटक शुरु गरे ।१९८५ मा उनले अर्थशास्त्रमा डिग्री प्राप्त गर्न दिल्लीको हंसराज विश्वविद्यालयमा नामांकन गर्नुभयो।
बलिउड स्टारहरु संजय दत्तदेखि सलमान खानसम्म पुगेको हिरासतमा अभिनेता शाहरुख खान पनि एक पटक पुगे। आफ्नो रि’सका कारण उनी प्रहरी हिरासत जानु परेको थियो । कुरा १९९३ को फिल्म ‘माया मेमसाहब’ हो । जसमा शाहरुखले फिल्म निर्देशककी श्रीमतीसँग एक प्रेम दृश्य बनाउनुपरेको थियो । ९० को दशकमा यस्ता सिमहरू एकदम बोल्ड मानिन्थ्यो।
यस फिल्मको दृश्यको बारेमा म्यागजिनका सम्पादकले लेखेका थिए – फिल्मका निर्देशक केतन मेहताले शाहरुखलाई एक रा’त आफ्नी श्री’मतीसँग बस्न आ’ग्रह गरे ताकि उनीहरूले एक अर्कालाई चिनुन् र प्रेम दृश्य शूट गरुन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यो लेख पढेर शाहरुख रि’साए। शाहरुखले सो पत्रिकामा छापिएको लेख पढेपछि यति रि’साए कि उनले पत्रिकाको सम्पादकलाई टोलिफोनबाट ध’म्की दिए । जसमा सम्पादकले उनीलाई शान्त हुन र लेखलाई मजाकको रूपमा लिनलाई बारम्बार आग्रह गरे ।
शाहरुखले सम्पादकको कार्यबाट रि’साए र सीधै पत्रिकाको कार्यालयमा गएर रि’साउदै नराम्रो व्यवहार गरे। पत्रिकाको अफिसमा गए र लेखकलाई ‘ सकिदिने ध म्कि दिए । यसपछि दोस्रो दिन शाहरुखको सुटिङ स्थलमा प्रहरीहरु आइपुगे र उनीहरूसँगै हिड्न भने।
शाहरुखले ती प्रहरीहरू उनका प्रशंसकहरू भएको सम्झिए । उनीहरूसँग भेट्न चाहन्छन् र उनीसँग जाने निम्तो दिइरहेका छन्। तर पछि उनले पत्रिकाको सम्पादकको उजुरीमा उनलाई पक्राउ गर्न आएको बुझे।
एक कार्यक्रममा शाहरुखले भने, ‘त्यस समयमा प्रहरीले मलाई पक्रियो र हिरासतको एउटा कोठामा राख्यो। मैले त्यहि पहिलो पटक प्रहरी हिरासत देखे जुन एकदम सानो ठाउँमा बनाइएको थियो र धेरै फोहर थियो। त्यहाँ मल र मूत्रका थुप्रा थिए । ‘ शाहरुखले एक दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउनुपर्‍यो र बेल पनि पाएका थिए।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
टिकटकमा बेहुलीहरुको प्रतिस्पर्धा, अर्की बेहुलीको भिडियो पनि भाईरल (भिडियो सहित)
जीवनभर निःसन्तान किन रहे दिलिप कुमार ? १९७२ मा त्यो कालो दिन के भएको थियो ?
January 1, 2021 goodmam